Opel သည် Amazon Spain မှတစ်ဆင့်ကားများကိုရောင်းချသည် Gadget သတင်း
Opel သည် Amazon Spain မှတဆင့်ကားများရောင်းချသည်
အွန်လိုင်းကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီကြီးသည်ကဏ္ in ရှိပုံမှန်အွန်လိုင်းစတိုးများထက်အဆင့်တစ်ဆင့်တက်လိုသည် အမှန်မှာမကြာသေးမီလများအတွင်း Amazon သည် Spotify သို့မဟုတ် Apple Music ကိုဆန့်ကျင်သောဥပမာအားဖြင့် Netflix သို့မဟုတ် HBO နှင့် Amazon Amazon Unlimited တို့ကိုယှဉ်ပြိုင်ရန်“ Prime Video” ကိုကမ်းလှမ်းခြင်းဖြင့်၎င်း၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ သို့သော်အခြားအွန်လိုင်းစတိုးများ၌သင်အမှန်တကယ်မမြင်နိုင်သောအရာကားကားရောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ Amazon ကပထမဆုံးပါ။ ဖွင့်သည် Opel ၏ SUV အသစ်ဖြစ်သော Grandland X ကိုရောင်းချခဲ့သည်.
Opel Grandland X သည် Peugeot မှဝယ်ယူပြီးနောက်ဂျာမန်နိုင်ငံ၏အကြီးဆုံး SUV -todcamino ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ဒီ model ဟာပြင်သစ် SUV ကား Peugeot 3008 နဲ့တော်တော်လေးဆင်တူတယ်။ Opel သည် Amazon စပိန်မှတစ်ဆင့်ပထမဆုံးယူနစ် ၂၀ ကိုရောင်းချခဲ့သည်။ သို့သော်သတိထားပါ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အသုံးပြုသူသည်ဝယ်ယူမည့်အရာသည်ယူရို ၅၀၀ တန်ဖိုးကြိုတင်ဘွတ်ကင်ကူပွန်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ထို့နောက်ကုမ္ပဏီသည်သူကိုယ်တိုင်ဖောက်သည်အားဆက်သွယ်လိမ့်မည် - အများဆုံးကာလအတွင်း ၃ ရက်အတွင်း။ Y ထိုကူပွန်၏ယူရို ၅၀၀ ကို Opel Grandland X ၏နောက်ဆုံးတန်ဖိုးမှလျှော့ပေးလိမ့်မည်။ အမေဇုံကြေငြာချက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းကူပွန်ငွေပေးချေပြီးနောက်အမေဇုန်က Opel ကိုအကြောင်းကြားလိမ့်မည်။ ငွေပေးချေပြီးနောက်မိနစ် ၆၀ အတွင်းဖောက်သည်ကို ဆက်သွယ်၍ အောက်ပါအချက်များသည်မည်သည့်အရာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြလိမ့်မည်။
Opel Grandland X ၏စုစုပေါင်းစျေးနှုန်းသည် 29.564,74 ယူရို။ ကမ်းလှမ်းသောမော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့်ကိုက်ညီ ၁.၆ cc ဒီဇယ်စက်နှင့် 1.6 hp ပါဝါ။ အပြီးသတ်သည်သာလွန်ကောင်းမွန်ပြီး၎င်းကို“ Excellence” ဟုလည်းခေါ်ပြီးအောက်ပါအချက်များပါဝင်သည်။
အသိဉာဏ်အလိုက်ရှေ့မီး AFL FULL LED
နေ့ခင်းဘက်ပြေးအလင်းများနှင့် LED အလှည့်အချက်ပြမှုများ
Park & ​​Go Pack3တွင်ပါဝင်သည်။ အလိုအလျောက်ကားရပ်နားရန်ကူညီခြင်း၊ လျှပ်စစ်အပြင်ဘက်ခေါက်ထားခြင်းများ၊.
Safety Plus Pack ။ ပါဝင်သည်: ပင်ပန်းနွမ်းနယ်သတိပေးချက်, မြင်ကွင်း pack ကို, တိုကျရိုကျတိုက်မှုသတိပေးချက်, အရေးပေါ်ဘရိတ်စနစ်နှင့်လမ်းကြောင်းပြင်ဆင်ချက်နှင့်အတူအတင်းအဓမ္မလမ်းသွားထွက်ခွာသတိပေးချက်။
Stop & Go ဖြင့်ကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်သောခရုဇ်ထိန်းချုပ်မှု။
လျှပ်စစ်တံခါးဖွင့်တံခါးနှင့်အတူ "Open & Start" သော့ဖွင့်ခြင်းနှင့်စတင်စနစ်
Ergonomic AGR သည်အားကစားထိုင်ခုံများအနက်ရောင်သားရေဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့်အလှဆင်ထားသည်။
ဘက်စုံသုံး Pack ကို။ ပါဝင်သည်: အောက်ထပ်ကုန်တင်ခွဲဝေနှင့်အတူချိန်ညှိကုန်တင်အခန်းကြမ်းပြင်, 40/60 ခေါက်နောက်ဘက်ထိုင်ခုံ backrest နှင့်နောက်ဘက်အလယ်ဗဟို armrest ခေါက်။
အနက်ရောင် Two-tone ခေါင်မိုး
အကယ်၍ သင်သည် Opel SUV အသစ်ကိုစိတ်ဝင်စားပြီး၊ ယခင်ပြီးမြောက်မှုများနှင့်စက်ပြင်များသည်သင့်ကိုယုံကြည်လက်ခံပါက၊ ဒီကနေသင်ကူပွန်ရနိုင်သည်။ သတိရပါ Opel က ၂၀ လုံးကိုသာကမ်းလှမ်းတယ်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » NOTICIAS » Opel သည် Amazon Spain မှတဆင့်ကားများရောင်းချသည်
HoloLens သည်စပိန်သို့ IP50 အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်နှင့်အခြေခံကာကွယ်မှုအတွက်ရောက်ရှိသည်